politics – enagrikkhabar
यस्तो छ एमाले, माओवादी र नयाँशक्तिबीच एकताको सहमति
आश्विन १७, २०७४-एमाले, माओवादी र नयाँशक्तिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । पार्टी एकता र आगामी निर्वाचनमा तालमेल घोषणा गर्न राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी नेता एवम् गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तीन पार्टीबीच भएको एकीकरणको ६ बुँदे योजना सार्वजनिक गरे ।
तीन पार्टीबीच पार्टी एकताको लागि भएको ६ बुँदे सहमतिको सारांश यस्तो छ :
तीन पार्टीबीच एकीकरण गरी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हाललाई ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने ।
समितिमा एमालेबाट ४, माओावदीबाट ३ र नयाँशक्तिबाट १ नेता रहने । विस्तृत खाका र योजना यही समितिले तयार पार्ने ।
पार्टीको नीति र विधान तयार पार्न दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गर्ने । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।
अब बन्ने पार्टीको मुद्दामा बहस गर्न सकिने । सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा माओवादीलाई ४० र एमालेलाई ६० प्रतिशत हुने गरी तालमेल गर्ने ।
निर्वाचनमा साझा घोषणा पत्र तयार पार्ने । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौंदा समिति तयार गर्ने ।
निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्य शक्तिलाई पनि आह्वान गर्ने ।
‘मौन अवधिमा पनि मत माग्दै उम्मेदवारहरु’
प्रदेश नम्बर २ मा सोमबार हुने स्थानीय चुनावका लागि मौन अवधि शुरु भइसकेकाले कुनै चुनावी प्रकारको प्रचारप्रसार नगर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ।
तर मतदातालाई प्रभावमा पार्ने उद्देश्यका साथ उम्मेदवारहरुले मौन अवधिमा पनि घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेको मतदाताले बताएका छन्।
प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि शुक्रबार राति १२ बजदेखि असोज २ गते १२ बजेसम्म मौन अवधि तोकिएको छ।
मौन अवधि शुरु भएदेखि चुनाव नसकिएसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायत कसैले पनि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन्।
तर प्रदेश नम्बर २ को पर्सा जिल्लामा मौन अवधिमा पनि उम्मेदवारहरु मत माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेको पाइएको छ।
नेताहरु बिहानैदेखि आउँछन्। विभिन्न कुराको लोभ देखाउँछन् अनि आफूतिर मत तान्ने प्रयास गर्छन्।
उम्मेदवारहरु घरदैलोमा पुगेर मतदातालाई आकर्षित पार्ने प्रयास गर्ने गरिरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मतदाता बताउँछन्।
एकजना मतदाताले भने, “नेताहरु बिहानैदेखि आउँछन्। विभिन्न कुराको लोभ देखाउँछन् अनि आफूतिर मत तान्ने प्रयास गर्छन्।”
मौन अवधिमा प्रचारप्रसार नगर्न आयोगले सचेत गराए पनि वीरगञ्जमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले घरदैलोमै पुगेर भोट मागिरहेका छन् भने कतै भोजभतेरको पनि आयोजना गरेको पाइएको छ।
त्यो कुरा निर्वाचनको अनुगमन गर्न पर्सामा निर्वाचन आयोगले खटाएको निर्वाचन अनुगमन टोलीका प्रमुख खेमराज ज्ञवालीले पनि स्वीकार गरे।
उनले भने, “अनुगमनका क्रममा झण्डा प्रयोग गरेर मोटरसाइकल, सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको पाइयो। हामीले यो गर्न हुँदैन, आचासंहिता विपरीत हो भनेर उनीहरुलाई चेतावनी दिएको अवस्था छ।”
मौन अवधिमै मतदातालाई प्रभावमा पार्न बढी चलखेल हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।
अनुगमनका क्रममा झण्डा प्रयोग गरेर मोटरसाइकल, सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको पाइयो। हामीले यो गर्न हुँदैन, आचासंहिता विपरीत हो भनेर उनीहरुलाई चेतावनी दिएको अवस्था छ।
खेमराज ज्ञवाली, अनुगमन प्रमुख, वीरगञ्ज
यस्तो अवस्थामा जिल्लामा खटिएका अनुगमन टोलीले कारबाहीका लागि आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढेको निर्वाचन अनुगमन टोलीका प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
उनले भने, “सूक्ष्म अनुगमनकर्ता गाउँ-गाउँमा खटिएर गोप्य रुपमा काम गरिरहेका छन्। र, हामीले विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर त्यो मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिलाई तत्काल रोकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनिती बनाएका छौँ।”
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएपनि उम्मेदवार र उनीहरुका समर्थक कार्यकर्ताले भने सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गर्दै मत मागिरहेका छन्।
मौन अवधि शुरु हुनुअगावै मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर राखिएका प्रचार सामाग्री हटाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म हटाइको देखिंदैन।
तर हटाउन निर्देशन दिइसकेको अनुगमन टोलीका प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
भारत सीमामा काडेतार लगाउन कतारले यस्तो भन्यो – जसले मोदीको सातो लग्यो
देश अहिले आफ्नो मान्छे को वृद्धि र विकास यसको सबै प्रयासमा ध्यान छ। कतार को शासकहरूले जहाँ हरेक व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सुविधा मा सबै भन्दा राम्रो प्राप्त द्वारा जीवित को एक उच्च मानक हुनेछ आफ्नो राष्ट्र को लागि एक भविष्य कल्पना। दिगो रहन तिनीहरूले समाज मा एकीकृत गर्न खेलकुद छन् भनेर कुरा एउटै हो।
को पुराना ज्ञात मानव Habitation को कतार मा प्रमाण फिर्ता 4th शताब्दी ई.पू. जो देखि डेनिस, ब्रिटिश र 1965 र 1976 को बीच फ्रान्सेली expeditions द्वारा unearthed थिए जो रक inscriptions, रक carvings, चकमक spearheads र पनि बर्तन जस्ता artefacts गर्न तिथिहरु।
कतार जसको लागि यो नौ पर्यावरण-मैत्री प्रतिष्ठित स्टेडियमों, 80,000 मानिसहरू सम्म पाहुना गर्न सक्षम हुनेछ केही जो निर्माण हुनेछ 2022 मा फिफा विश्व कप पाहुना हुनेछ।
दोहा (विज्ञापन Dawha) Georgraphic सूचना प्रणाली लागि केन्द्र अनुसार कतार र साधन ‘वस्तुरुपान्तरणगर्नुहोस्’ को राजधानी शहर हो।
तपाईं दोहा नयाँ हो भने, अनलाइन समुदाय फेला तिमीहरूलाई चासो गतिविधिहरु मुछिन उत्तम तरिका हो। फेसबुक पृष्ठ अलग्गै, अन्य लोकप्रिय फोरम QatarLiving, ILoveQatar र दोहा Tweetups समावेश गर्नुहोस्।
तपाईं एउटा चलचित्र शौकीन हुनुहुन्छ भने, नियमित साथै स्वतन्त्र लोकप्रिय फिलिमहरु को एक नम्बर स्क्रीन जो दोहा फिल्म संस्थान मा रूपबाट रहनुहोस्। कतार वरिपरि विभिन्न मल मा सिनेमा थिएटर को एक अधिक व्यावसायिक फिलिमहरु भन्दा हेर्न, टाउको। संगीत को लागि, तपाईं यस्तो प्रत्यक्ष ज्याज, शास्त्रीय संगीत र हरेक अब र फेरि कतार वरिपरि स् मा प्रदर्शन अरूलाई रूपमा विकल्पहरू छन्। ज्याज प्रेमीहरूको Oryx Rotana गरेको ज्याज क्लब मा सेन्ट REGIS दोहा वा दोहा ज्याज मा लिंकन केन्द्र बाहिर ज्याज जाँच गर्न सक्छन्। को कतार Philharmonic आर्केस्ट्रा केही सप्ताहन्तमा मा इस्लामी कला पार्क को संग्रहालय मा साथै Katara गरेको ओपेरा हाउस खुला हावामा संगीत मा नियमित कार्य गर्दछ।
डिसेम्बर 18 कतार राष्ट्रीय दिवस हो। यसको अन्य वार्षिक राष्ट्रिय बिदा केही छन् कतार राष्ट्रीय खेल दिन फेब्रुअरी दोस्रो मंगलवार मनाइन्छ। यो मुख्य एक इस्लामी देश छ रूपमा, Eid अल Fitr र Eid अल Adha उत्सव अवसरमा छन्।
पर्ल कतार मोती को एक स्ट्रिङ आकारको कृत्रिम द्वीप मा निर्मित एक लक्जरी विकास हो। यो पुरानो मोती डाइभिङ साइट को शीर्ष मा निर्मित र, भोजन गर्न, socialize लक्जरी परिधान वा उत्पादनहरु लागि दोकान, वा marina साथ टहलने आनंद मान्छे को लागि एक महान ठाँउ हो थियो। तपाईं पर्ल मा बैंकिङ विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, व्यावसायिक बैंक 14 ला Croisette (सम्पर्क 4449 5377/5378) मा र पोर्टो अरब म (सम्पर्क 4449 5470/5474) मा स्थित शाखा छ।
विश्व-प्रसिद्ध architect म एम pei यसको भव्य ज्यामितीय संरचनासँग, दोहा मा इस्लामी कला को संग्रहालय डिजाइन। यो 2008 मा खुलेको र दुवै इस्लामी र आधुनिक वास्तुकला शैलीहरू एक मिश्रण छ थियो।
कतार मरुभूमि छ तापनि, यो वनस्पति र जीव को एक विविध सीमा छ। बैजनी द्वीप यो एउटा उदाहरण हो। दोहा बाट 40 कि.मि. मा स्थित अल Khor को Township नजिकै, बैजनी द्वीप यो भर धेरै कम चूना भीर र एक किसिमको जडीबुटीको प्राकृतिक वन माछा को सीमा छ कि, शंख साथै चरा, जो ट्रान्जिट गुलाबी flamingoes सहित एक माछा आकारको द्वीप डट छ कतार मार्फत आफ्नो मौसमी माइग्रेसन समयमा। परम्परागत उँट जात अल Shahaniya आयोजना गरिन्छ हरेक जाडो, छैनन् जो छुटेका गर्न।
अरबी कतार को राष्ट्रिय भाषा हो तर कारण यहाँ बस्नुहुन्छ कि एक ठूलो प्रवासी जनसंख्या गर्न, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रान्सेली, मलयालम र टागालोग पनि व्यापक प्रयोग गरिन्छ।
कतार मा सप्ताहन्तमा शुक्रवार र शनिबार गिरावट। सबैभन्दा स्टोर सामान्यतया Jum’ah दिउँसो प्रार्थना सम्म शुक्रवार बिहान बन्द छन्।
Souq Waqif कतार सबैभन्दा जीवंत सामाजिक हटस्पट को छ। यसलाई साथै परम्परागत उत्पादन जस्तै, येमेनी इरानी, ​​इराकी, थाई, मलेशियन, भारतीय आदि रूपमा व्यञ्जनहरु को एक किसिम सेवा रेस्टुरेन्ट दायरा पनि लागि एक लोकप्रिय स्थान हो बिक्री पसलहरूमा विभिन्न घरहरुमा जो एक परम्परागत सांस्कृतिक बजार छ , shisha पाइप धूम्रपान पर्यटकहरूलाई राम्रो खाना आनन्द, वा लामो हप्ता पछि आराम। यी बाहेक, Souq Waqif पनि जो कतार को परम्परागत चरा हो Falcons लागि एक रोचक पशु सर्जरी केन्द्र छ।
कारण देशको अथाह तट गर्न, समुद्र तट वा मरुभूमि मा शिविर adventurous लागि लोकप्रिय विकल्प छन्। सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट यहाँ केही जहाँ बालुवाको ढिस्को bashing एक लोकप्रिय खेल हो Fuwairit बीच, Dukhan बीच, Simaisma बीच साथै सबैभन्दा तिनीहरूलाई को लोकप्रिय, Mesaieed मा Sealine बीच समावेश गर्नुहोस्। बालुवाको ढिस्को मूलतः bashing मान्छे एक एसयूवी गाडी माथि र तल ठूलो स्यान्डड्युन चढेर समावेश छ। बालुवाको ढिस्को buggies Mesaieed मा Sealine Beach Resort मा भाडामा उपलब्ध छन्। तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईंले वसन्त समयमा Fuwairit बीच को किनारमा मा अन्डा बिछाउने पनि महिला hawksbill कछुवा पकड सक्छ।
दोहा हुँदा, स्थानीय भन्सार र संस्कृति आदर को एक चिन्ह रूपमा नम्र भई लुगा। दुवै महिला र पुरुष प्राथमिकताको आफ्नो हतियार कवर गर्नु पर्छ घुँडा र महिला माथि कि जाने लुगा लगाएका नगर्न गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक यातायात को Mowasalat यातायात सी द्वारा taxicabs र बसें को रूप मा सबै दोहा उपलब्ध छ
साझा सवालमा कडा प्रश्न तेर्स्याउँदा प्रचण्ड, ओली र देउवा मध्ये कसको जवाफ कस्तो ? (हेर्नुहोस भिडियो)
यहाँ यो भिडियो मा तपाईं कुमार Sanu संग कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले कन्सर्ट लागि नेपाल छ। केदारनाथ Bhattacharya, राम्रो कुमार Sanu रूपमा जानिन्छ, एक प्रमुख भारतीय प्लेब्याक गायक, 1990 को दशक र प्रारम्भिक 2000s को बलिउड चलचित्र मा आफ्नो आवाज प्रतिपादन लागि ज्यादातर लोकप्रिय छ। उहाँले सबैभन्दा गीतहरू एक दिन, 28 मा उहाँले पाँच लगातार वर्ष को लागि Filmfare सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक पुरस्कार सम्मानित गरियो वर्ष 1993. मा, रेकर्ड लागि गिनीज बुक विश्व रेकर्ड धारण। 2009 मा, भारत को सरकार आफ्नो उपलब्धिहरू को पहिचान मा पदम श्री, भारतको चौथो-उच्चतम नागरिक सम्मान, उहाँलाई पुरस्कृत गरियो।
अर्बौ भ्रष्टाचार र घोटालामा दर्जन मन्त्री र कर्मचारी समातिदै (भिडियो हेर्नुहोस)
Chudamani शर्मा, को इन्ल्यान्ड राजस्व विभाग निर्देशक सामान्य, अन्तमा प्राधिकरण (CIAA) को दुरुपयोग को जांच लागि आयोग खुद अन्तर्गत आएको छ। शक्तिशाली राजनीतिज्ञ नजिक लिंक स्थापना गरेर धन थुपारिरहेका लागि खराब नाम कमाएका थिए शर्मा राजस्व को fixation मा भ्रष्टाचार को उसलाई आरोपित, शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो। शर्मा आफ्नो अधिकार दुरुपयोग र अवैध विभिन्न व्यापार कम्पनीहरु द्वारा ऋण लिइएको विशाल कर exempting गर्दा रूपैया लाखौं embezzling आरोप थियो। शर्मा एक कर बसोबास आयोग को कर छुट अर्ब रुपैया 20 कम्पनीहरु गर्न लायक दिनुभएको सदस्य-सचिव थिए। उहाँले पनि कम्पनीहरु देखि भ्याट waiving आरोप लगाए। शर्मा वित्त मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने नेताहरूले, विशेष गरी ती घनिष्ठ लिंक थियो रूपमा उहाँले चार वर्षसम्म वित्त मंत्रालय मा सेवा गरिएको छ। यसअघि उहाँले सुनसरीका, ललितपुर र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपमा घर मंत्रालय मा सेवा गरे। सुनसरीका आफ्नो अवधि समयमा उहाँले अन्य ग्याँस कम्पनीहरु को सिलेंडर चोरी गरेकी सुगम ग्याँस, मालिक सुरक्षा दिएको थियो। को CIAA यसको हिरासत मा शर्मा राखिएको छ। तथापि, बीर अस्पताल चतुर शर्मा पहिलो पुग्यो र त्यसपछि उहाँले छाती मा समस्या थियो कि सोमबार Norvic अस्पताल बताउँदै। उहाँले एक हप्ताको लागि आफ्नो remand खोजिरहेका विशेष अदालतले मा प्रस्तुत गरिएको थियो। Sharama चाँडै सचिव को पोस्ट गर्न पदोन्नति प्राप्त थियो र उहाँले भविष्यमा एक संभावित प्रमुख सचिव रूपमा देख्यो थियो। तर अब त्यो आफ्नो भ्रष्ट गतिविधिहरू लागि सूप मा भएको छ। दीप Basnyat अन्तर्गत CIAA एनसेलले सहित विभिन्न प्रकारका गर्न कर छुट पछि एक मुख्य दोषी नही रूपमा चित्रण थियो शर्मा गिरफ्तार कृतज्ञता आएको छ। चाखलाग्दो कुरा, एनसेलका दुई दिन शर्मा गरेको गिरफ्तारी पछि कर राशि रु 13 अर्ब लाभ कर भुक्तानी।
मोदीसँग देउवाले टक्कर लिए ! भारतको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार । अचम्ममा मोदी (भिडियो सहित)
Prime Minister Sher Bahadur Deuba and CPN (Maoist Centre) Chairman Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ heldameeting regarding the operation of the government, ministerial power sharing and cabinet expansion Tuesday evening.
Also present at the meeting held at the Prime Minister’s official residence in Baluwatar, the top leaders of the both parties agreed to expand the cabinet soon.
Maoist leader Barsha Man Pun saidafinal touch would be given to the discussions after holdingameeting Wednesday.
PM Deuba, Chairman Prachanda, Deputy Prime Minister and Maoist leader Krishna Bahadur Mahara, Home Minister Janardan Sharma, leader Pun, Nepali Congress leader Bimalendra Nidhi and Ramesh Lekhak were present in the meeting.
[सम्पादकीय] गति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू !
श्रावण ४, २०७४- व्यवस्थापिका–संसद्मा दुई तिहाइ मत पाएर चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सुस्त कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन आउँदो माघ ७ अगावै गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउने मुख्य कार्यसूची रहेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
तर सरकारको नेतृत्व गरेको करिब डेढ महिनाको अवधिमा उनले निर्वाचन तयारीका लागि जुन किसिमको तत्परता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । त्यति मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाको यस्तो सुस्त शैलीले संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमै संशय पैदा भएको छ ।यसअघि तीनचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेकाले देउवाका लागि यो पदीय जिम्मेवारी नौलो होइन । तर आफ्नो अनुभव/परिपक्वता अहिले जसरी प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा उनी चुकिरहेको देखिन्छ । देउवालाई यति बेला संवैधानिक संक्रमण टुंग्याएर आफ्नो छवि सुधार्ने अवसर छ, किनभने विगतमा उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेलाका कतिपय घटना बिर्सनलायक छन् । देउवाले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला संसद् विघटन गरेका थिए, जुन तत्कालीन राजाका लागि सत्ता हत्याउने सिँढी बन्यो र उनी नै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शाही ‘कू’ भयो । विगतमा भएका सांसद किनबेच, प्राडो–पजेरोलगायतका काण्ड पनि देउवासँगै जोडिन्छन् । १२ वर्षपछिको यो सत्तारोहणका बेला पुराना तीता घटनाक्रमलाई आफ्ना उत्साही कार्यमार्फत ओझेलमा पार्ने अवसर उनलाई उपलव्ध छ, तर त्यसअनुरूपको गति र दृढता देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारोहण गरेपछि भएको महत्त्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हो । तर राजपा नेपालको असन्तुष्टिका कारण चुनौतीपूर्ण ठानिएको प्रदेश नं. २ मा भने स्थानीय चुनाव हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले नै त्यसलाई सारेर असोज २ मा पुर्‍याएको छ, राजपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने कार्यमा भने अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको राजपाले आसन्न स्थानीय चुनावमा भाग लिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । यो विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने राजपाको सहभागिताबिना तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने काममा उदासीनता पनि उदेकलाग्दो छ । निर्वाचन गराउनुपर्ने समय केही महिना मात्र बाँकी रहेका बेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य छानिने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी कानुन चैतमै बनेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन साउन १५ भित्रै दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । ढिला गरी क्षेत्र निर्धारण भए निर्वाचनको तयारीमै असर पुग्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले छोटो समय पाए गृहकार्य नपुगेर बढी विवाद हुने जोखिम हुन्छ । यसबीचमा पुरानो २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका केही नेताले छलफल चलाए पनि त्यसतर्फ जान उपयुक्त छैन । सरकारले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम जतिसक्दो छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस संयोजक र स्वकीय सचिव ढिला गरी नियुक्त गरे तापनि महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक, आर्थिकलगायतका सल्लाहकार/विज्ञ छान्न सकेका छैनन् । करिब डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु झन् विडम्बनापूर्ण छ । अहिले करिब दुई दर्जन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । सत्ता साझेदार दलको टुंगो, ती दलहरूबीच तथा दलभित्रका गुटमा भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको यो अलमललाई सत्तारूढ दलहरूले तत्काल किनारा लगाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन गराउने मूल कार्यसूचीमा अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई अहिले गतिवान सरकार प्रमुख चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यो आवश्यकतालाई चाँडै आत्मसात गरेको राम्रो ।
बालुवाटार बैठकमा राजपाका नेताले भने- यस्तै ताल हो भने प्रदेश २ मा पनि एमाले पहिलो हुन्छ
काठमाडौं, २९ असार । मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकमा सहयोग नगर्ने भनेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह लिन राजपालाई बोलाइएको थियो ।
तर, बैठकको विषयवस्तु एकाएक मोडियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमै टीकापुरको चुनावी नतिजालाई लिएर असन्तुष्टि जनाए । जहाँ अन्तिममा एमाले विजयी भयो ।
प्रचण्डले आफूले सरकारमा रहँदा टीकापुर घटनाका पीडितलाई ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिएको र स्वयं चुनावी अभियानमा सहभागी भएपनि एमालेले कसरी चुनाव जित्यो भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
बैठकमा सहभागी राजपाका एक नेताका अनुसार यस्तो प्रश्नपछि राजपाका शीर्ष नेताले ‘पैसा बाँडेर मात्र चुनाव नजितिने’ भन्दै टीकापुर घटनामा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता लिएको भए यस्तो परिणाम आउनेथिएन् भनेका थिए ।
यस्तै ताल हो भने प्रदेश नम्बर दुईमा पनि एमाले आउछ
बैठकमा राजपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस्तै ताल रहे असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले पहिलो पार्टी बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । ‘
अहिले मधेसका जनता एमालेभन्दा पनि कांग्रेस–माओवादीप्रति बढी आक्रोशित छन् । तपाईहरुले माग पूरा गर्नुको सट्टा हामीलाई झुलाउने काम मात्र गर्नुभयो । यसैको फल हो टिकापुरको नतिजा ।
अब पनि केही एक्सन लिनुभएन् भने दुई नम्बर प्रदेसमा पनि एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्छ’ राजपाका नेताले बैठकमा सचेत गराएका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई कार किन्न १६ करोड माग
काठमाडौं, २५ असार । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसंग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ उपलबध गराउने भने पनि राष्टपतिको चाहनाअनुसार रकम अपुग भएको भन्दै कार्यालयले गत साता रक्षा मन्त्रलायसंग थप करोड रुपैपाँ मागेको हो ।
राष्टपत कार्यालयले नेपाली सेनामार्फत गाडी खरिद गर्न लागेको हो । सेनाको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका लागि गाडी किन्न १६ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।
केपी ओली धनकुटामा पुग्दा हजारौ सर्वसाधारण बाहिर निस्किए, बिजय सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यसो भने धनकुटा अब प्रदेशको राजधानी हुन् सक्छ हेर्नुहोस भिडियो (भिडियोसहित)
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धनकुटा १ नं प्रदेशको राजधानी बन्नसक्ने सम्भावना बढेको बताउनुभएको छ ।
धनकुटाका स्थानीय तहका विजयी पदाधिकारीलाई बधाई दिन आज धनकुटा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले धनकुटाका सातवटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकछत्र विजय गरेका कारण एमाले धनकुटाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा एमालेविरुद्ध देशभरि भएका विभिन्न गठबन्धनले परास्त गर्न नसकेको भन्दै ओलीले नेकपा (एमाले) नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहमा विजयी भई पहिलो पार्टी हुन सफल भएको बताउनुभयो ।
एमालेले धनकुटा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको भन्दै नेपालभरिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटाको विशेष स्थान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुबई जादै हुनुहुन्छ , रोकिनुस पहिला यो भिडियो हेरौ र पछि बल्ल दुबई जाने कि नजाने निर्यण गर्नुहोस !!!
यौन सम्पर्क गर्नु भन्दा ५ मिनेट अगाडी .लिङ्गको आकार मोटो र ठुलो बनाउने सरल तरिका : जानी राखौ ||
मायालाई धक्का दिन थालें
०७४ सालमा देशभक्त वामपन्थीको सरकार, समाजवादको नयाँ मोडल नेपालबाट शुरु